Minisitry ny Fitsarana vaovao : “Hisy fanavaozana lehibe ny ady amin’ny kolikoly” | NewsMada
Minisitry ny Fitsarana vaovao : “Hisy fanavaozana lehibe ny ady amin’ny kolikoly”
Par Taratra sur 20/04/2016
“Ny tena fanavaozana lehibe amin’ny ady amin’ny kolikoly: efa nahazo famatsiam-bola isika hahazoan’ireo sampandraharaha mpanara-maso roa ety amin’ny minisitera sy ny fitsarana tampony hanao fanaraha-maso ny antokom-pitsarana eran’i Madagasikara.”
Izay ny fanambaran’ny minisitry ny Fitsarana vaovao, Andriamiseza Charles, efa sekretera jeneralin’io minisitera io teo aloha, tamin’ny famindram-pahefana teny amin’ny minisiteran’ny Fitsarana, Faravohitra, omaly. Voalazan’ny Politika ankapoben’ny fanjakana ny ady amin’ny kolikoly, ny fitsarana manakaiky ny vahoaka, ny fahadiovan’ny fitsarana amin’ny fampiharana ny fangaraharana.
Ambonin’izany, hanome baiko ny lehiben’ny fitsarana ambony mba hanao fitsirihana sy fanaraha-maso ny antokom-pitsarana feheziny izy, ny amin’ny ady amin’ny kolikoly araka ny fanazavany.
Fifaninanana no hidirana eny amin’ny Sekolim-pirenena famoahana mpitsara sy mpirakidraharaha (ENMG). Nanomboka ny taona 2014: mpitsara madio 100 %, mangarahara, araka ny nambarany.
Efa an-dalam-pandaminana ny fitokonan’ireo sendikà
Hampiantso ny Sendikàn’ny mpirakidraharaha sy ny Sendikàn’ny mpandraharaha fonja ny minisitry, hifampidinika momba ny fitakian’izy ireo amin’ny fitokonana ataony. Maro ny dingana efa vita. Ny an’ny mpandraharaha fonja, ohatra: efa an-dalana ny fanatanterahana izany. Ho hita afaka folo andro raha ela indrindra ny valiny. Ny an’ny mpirakidraharaha, efa naloa avokoa ireo vola tokony ho naloa.
Antenaina hihena na foana ny kolikoly
Ho foana na hihena amin’izay ahay àry ve ny kolikoly eny anivon’ny fitsarana? Anisan’ny mahabe fitarainana indrindra ny amin’izany ny fitsarana, raha ny tatitry ny Bianco hatramin’izay. Tsy atokisan’ny vahoaka indrindra io sehatra io, raha ny fanadihadian’ny Afrobaromètre. Tsy ho fitaovana politikan’ny fahefana mpanatanteraka intsony koa ny fitsarana? Na hisy fiovana vetivety izany… Eo ny vahoaka hitsara.